IELTS ပြင်ဆင်လိုသူများ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းများ (အပိုင်း၁) – SLD EDUCATION
IELTS နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသား/သူတွေ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ/ သိသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
IELTSအတွက် ready ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက် ပြင်ထားသင့်လဲ
IELTS (Academic) ကဘာကို တိုင်းတာလဲဆိုတာကို ရိုးရိုးပြောရရင် collegeတို့၊ MA/PhDတို့တက်ရင် စာလိုက်နိုင်ဖို့ English levelရှိလားဆိုရင် မမှာ:ပါဘူး။ ဉပမာ Englishကိုသုံးပြီးသင်တဲ့ ကောလိပ်တွေမှာ Philosophy Major, English Literature, Sociology, Law, etc. ထဲက Major တစ်ခုခုကို ယူမယ်ဆိုပါဆို့။ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီး ဖတ်ရမယ် Discussion, sharings , အမျိုးမျိုးလုပ်ရမယ်။ Writing assignments (ဉပမာ-reaction/reflection paperတွေ (သို့) ဖတ်ထားတဲ့ theoriesတွေကို လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အစရှိတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကို ပြန်သုံးသပ်ပေးရတဲ့ paperတွေ) အများကြီးရေးရမယ်၊ Final research/project တွေဆိုလည်း ဘာသာရပ်တစ်ခုဆီအတွက် လုပ်ရမယ်။ အဲဒါတွေလုပ်နိုင်ဖို့ စာအုပ်တွေဖတ်ရမယ်၊ note ထုတ်တတ်ရမယ်၊ paraphrase, summary တွေလုပ်တတ်ရတယ်၊ ပြီးတော့ အချက်ကျကျလည်း ရေးနိုင်ရမယ်။ အတန်းတိုင်းမှာ Discussions တွေမှာလည်း တက်တက်ကြွကြွပါနိုင်ရမယ်၊ မေးနိုင်ရမယ်၊ ရှင်းပြနိုင်ရမယ်။ ကိုယ့်ဖက်ကလည်း ကောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေကို သူများတွေ သင်ယူသွားနိုင်အောင် (contribute)လုပ်နိုင်ရမယ်။ ဒါတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့ Academic English skills ရှိလားဆိုတာ IELTS ကတိုင်းပေးတာပါ။ College အတွက်ဆိုရင် Band 5.5/6 လောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပေမဲ့ ကောလိပ်မှာ ဘယ်လိုကလေးတွေနဲ့ အတူ ကျောင်းတက်ရမလဲ” မေးသင့်ပါတယ်။
ပညာရေးစနစ် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ Medium of instruction (အတန်းထဲမှာ သုံးတဲ့ရတဲ့ဘာသာစကား) ကို Englishသုံးပြီးသင်ပေးတဲ့ ကျောင်းတွေက ကလေးတွေဆိုရင်…11 တန်းနှင့် 12 တန်းမှာ college ရောက်လို့ ရှိသင့်တဲ့ skills တွေကို ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတကယ်လို့ IELTSကို ဖြေနည်းသိလိုက်တာနဲ့ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကျင့်လိုက်တာနဲ့ 6.5/7 လောက်ရနေပြီ။ သူတို့နဲ့ ပြိုင်ပြီးသင်ရမယ်ဆိုတာကို သတိယပါ။ Science အပိုင်းသွားတဲ့ သူတွေဆိုရင်တော့ Theoriesတွေ၊ တွက်တာတွေ ပိုလုပ် ရတော့ English စာ နည်းနည်း အားနည်း (IELTS Band 5.5) နေရင်လည်း အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
English မကောင်းဘဲ ကောလိပ်တက်လို့ ရလား?
ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူများတွေ တစ်နာရီလောက်ရေးတဲ့ paperကို ကိုယ်က ၁၀နာရီလောက်ရေးရမယ်။ အမှတ်ဆိုရင်လည်း သူများတွေက A ဆိုရင် ကိုယ်က အများဆုံး C (သို့) Bလောက်နဲ့ ပြီးပြီးသွားမယ်။ စာအုပ်ဖတ်ရင်လည်း သူများက တစ်အုပ်ကို ၁နာရီဖတ်မယ် ဆိုရင် ကိုယ်က 10 နာရီလောက်ဖတ်မှ နားလည်မယ်။ Professor သင်ပေးတဲ့ဟာကို noteလဲ မထုတ်တတ်။ တစ်ခေါက်ရှင်းပြရင် နားမလည်။ အတန်းထဲမှာ သူများတွေက မေးခွန်းကောင်းကောင်းမေးနိုင်တယ် ဖြေနိုင်တယ်။ ကိုယ့်ကို professors တွေက မျက်နှာပျက်မှာစိုးလို့ သနားပြီး မေးခွန်းမမေးတာတို့ သနားလို့ အအောင်ပေးတာတို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါက English စာတစ်ခုထဲအတွက်ပဲ ပြောရသေးတာပါ။
USသွားပြီး studyလုပ်တဲ့ အရမ်းတော်ပြီးသား တချို့မိတ်ဆွေတွေကို ပြင်ဆင်ချိန်ဘယ်လောက်ယူပြီးသွားလဲ မေးတော့ ၂နှစ်လောက်ယူတယ်လို့ပြောတယ်။ တော်ပြီးသားသူတွေတောင် ဘာလို့ အဲလောက်တောင် ပြင်သွားလဲလို့ မေးမယ်ဆိုရင်… နိုင်ငံတကာအဆင့် readyဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူများနိုင်ငံမှာ college မတိုင်ခင် ဘာတွေ သင်ပြီးပြီလဲ ဆိုတာကို နည်းနည်းပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
Collegeကို Finlandက ကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပါစို့။ သူတို့ဘယ်လောက်သင်ပြီးလဲ ဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါ။ Finland မှာဆိုရင် pre-nursery ကို2နှစ်သင်တယ်။ Nursery (Kindergarten) ကို2နှစ်သင်တယ်။ အသက် 7နှစ်မှာ တစ်တန်းစတက်ရပြီး 12 တန်းအထိတက်ရတယ်။ သင်ပေးတဲ့ပုံစံဆိုရင်လည်း subject တစ်ခုကို ဆရာ/မ သုံးလေးရောက်က ကူသင်ပေးတယ်။ ကျောင်းသား/သူတွေကို အိမ်မှာလည် guide လုပ်ပေးမဲ့သူတွေရှိတယ်။ ကျောင်းသူ/သားတွေကို support လုပ်ပေးတဲ့ counseling တို့ဘာတို့ကလည်းရှိသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ curriculum, သူတို့ရဲ့ အရမ်းကို ထိရောက်တဲ့ သင်ကြားစနစ်တွေကို လည်းထည့်တွက်ကြည့် လိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ ဘယ်လောက်သင်ပြီးသွားပြီဆိုတာကို အကြမ်းအားဖြင့် နားလည်နိုင်ပါတယ်… သူတို့နဲ့ အတူ college တက်မယ်ဆိုရင် ပညာသင်စနစ်ကလည်း သိပ်မကောင်းတဲ့ backgroundကနေလာမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်လည်းဆိုတော့ 14 တန်းစာတွေကို 14တန်းကျောင်းသူ/သား တွေကြားမှာ ကိုယ်က 10တန်းပဲရှိနေသေးပြီး သွားတက်တာနဲ့တူနေနိုင်လောက်တယ်။ အဲသလိုသာဆိုခဲ့ရင် ခက်တာပေါ့။
6တန်းကလေးကို 10တန်းစာမလုပ်တတ်လို့ စာညံ့တယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ကိုယ်က college သွားတက်ချင်ရင် ကိုယ့်အတွက်လည်း အကောင်ဆုံးရလတ်ရှိချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကို တွက်ကြည့်ပြီး ရှိတဲ့ အချိန်လေးတွေကို ကောင်းကောင်း အသုံးချမယ်၊ သင်ယူတာ သင်ယူမယ်၊ ပြင်ဆင်သင့်တာ ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် ဘာမှာ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ အထဲမှာ English တစ်ခုလေးကိုတော့ ကောင်းကောင်းလေးလုပ်သွားသင့်ပါတယ်။ English စာကောင်းရင် တစ်ခြားဘာသာတွေလည်း study လုပ်ရတာ ပိုမြန် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ မကောင်းဘဲသွားရင် ဟိုရောက်မှ ၆လ/၁နှစ်လောက် ပြန်တက်နေရရင် သင်တန်းကြေး၊ နေစားရိတ်၊စားစရိတ်တွေ ထောင်းသွားမယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပြောတာပါ။ English စာအပိုင်းပဲ ဆက်ပြောရအောင်…
***Note: စာကို အလွတ်ကျက်သင်တဲ့ စနစ်မှာ textbook တစ်အုပ်ပဲ တစ်နှစ်လုံး သုံးတာများတယ်။ စံချိန်မှီတဲ့ကျောင်းတွေမှာ တစ်နှစ်အတွင်း စာအုပ်ဘယ်လောက်ဆီ ပြီးတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်း ထည့်တွက်စဉ်းစားပေးပါ။
Englishလုံးဝမသင်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီဆိုရင် အလိုအလျောက် English ပြောတတ်သွားမလား?
တချို့က အလိုအလျောက်ကောင်းလာမယ်ထင်ကြတယ်။ ကျောင်းမတက်တဲ့သူတွေကို အရင် ကြည့်ရအောင်။ အရောက်၁၀၀မှာ တစ်ယောက်ကောင်းလာဖို့တောင် ခက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ သူငယ်ချင်းရမယ်၊ စကားတွေအများကြီးပြောရမယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ အမှန်တော့ နိုင်ငံခြားမှာ 15 နှစ်လောက်နေပြီးသွားတဲ့ သူတွေဆိုလည်း အမြဲပြောဖေါ်ပြောဖက် သူငယ်ချင်းတွေ မရတာကများတယ်။ ကျောင်းသွားတက်ရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေရတာတော့ သေချာတယ်။ ပြောလည်းအမြဲပြောရမယ်။ ဒါပေမဲ့ English စာလုံးဝမသင်ဖူးဘူးဆိုရင် ထမင်းစားရေသောက် တစ်ကြောင်းစ နှစ်ကြောင်းစကိုပဲ broken ပြောတာများတယ်။ စာမလိုက်နိုင်တာကိုတော့ ပြောမနေတော့ဘူး။
ဘယ်သူမဆို စနစ်တကျ မသင်ယူဘဲနဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုကို မနက်အိပ်ယာထတာနဲ့ ပြောတတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ Broken တွေပဲ သုံးသွားတဲ့သူတွေက နောက်ပိုင်းဆိုရင် သင်ပေးရတာ ပိုတောင် ခက်သွားတတ်သေးတယ်။ အခြေခံပိုင်းကိုတော့ အနည်းဆုံး သင်သင့်တယ်။
အခြေခံပိုင်း အနည်းဆုံး ဘယ်လောက်သင်သင့်လဲ?
တစ်နေ့တစ်နေ့ လူတွေစကားပြောပြီဆိုရင် 75ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို Beginner နှင့် Elementaryထဲက Grammar points တွေသုံးတယ်။ ဒီ Grammar pointတွေကို မှန်မှန်လေးသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင် Englishလိုပြောတဲ့ နေရာရောက်ရင် ပြောရင်းနဲ့ skills တွေမြင့်လာနိုင်တယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေဆိုရင် Pre-intermediate level (IELTS Band 4/4.5) လောက်တော့ ကြေညက်နေသင့်ပါတယ်။ ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး Intermediate level (IELTS 5/ 6) ကြေသင့်ပါတယ်။ လျှောက်တဲ့ကျောင်းတိုင်းကို အလွယ်တကူဝင်ခွင့်ရချင်တယ်၊ scholarship တွေလည်း ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Advanced (IELTS 7+) တော့ရှိသင့်တယ်။
ဘာလို့ English စာကို ပဲတက်ခိုင်းနေတာလဲ၊ research writing တို့၊ Thesis writing တို့၊ dissertationn writingတို့ကော် အရေးကြီးတယ် မပြောတော့ဘူးလား?
English စာစသင်ပြီဆိုရင် Pre-Intermediateလောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ Academic skills တွေအများကြီးပါလာပြီ။ Upper-Intermediate လောက်ရောက်ပြီဆိုရင် thesis ရေးမလား၊ dissertation ရေးနည်းသင်မလား။ ကြိုက်တာသင်ပေး ရပါတယ်။
Thesis writing တို့ဘာတို့ဆိုတာ တစ်နာရီလောက်ဖတ်လိုက်ရင် သဘောပေါက်တယ်။ Thesis ရေးတဲ့နေရာမှာ တကယ်ခက်တာက ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ topic ရဖို့ပဲ။ Topicလေးရဖို့ကို6လ/ တစ်နှစ်အတွင်း စဉ်းစားရတယ် စာအုပ်တွေ အများကြီး ဖတ်ရတယ်။ ခေါင်းစဉ်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ proposal ကို 3လကနေ 6လလောက်ထိ ရေးပြီး defend လုပ်လို့ရပြီ။ Topicကို panels တွေက အတည်ပြုပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ထပ် 6လ-တစ်နှစ် data-collection လုပ်ရတယ်၊ interpret လုပ်ပြီး paper မှာထည့်ရတယ်။ အဲဒါတွေက ခက်တာ။ English စာအားနည်းနေရင် ပိုခက်တယ်။
Master အတန်းတွေဆိုရင် Mentor (professor) တစ်ယောက်ကို appoint လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ သူတို့ကကူညီပေးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ PhDတက်မယ်ဆိုလဲ Master programနဲ့ အတူတူပဲ။ Master level က ဘယ်လောက်ဖတ်ပြီး နားလည်တာကို ဘယ်လောက်၊ ကိုးကားရေးနိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်တာဆိုရင် မမှာပါဘူး။ PhDက သူများမရေးဘူးသေးတဲ့၊ မသိသေးတဲ့ idea/topicကို research လုပ်ပြီးရေးရတယ်။ အဲဒါပါပဲ။
College သွားတက်ချင်တယ်ဆိုရင် college မှာလိုတဲ့ Academic English skills (11တန်း/12တန်းကအဆင့်) ကို ပြင်ထားပါ။ Master တက်ချင်ရင် ကိုယ့် ရေးတဲ့ Academic English skills (ကောလိပ်ပြီးတဲ့သူရဲ့ levelလောက်) ကောင်းအောင်ပြင်ထားပါ။ PhDဆိုရင် တွက်လို့ရပါတယ်။
English စာLevelကို Beginner လောက်နဲ့ IELTS/Academic Writing တို့ကို တက်လို့ရလား?
တစ်ချို့က English စာမသင်ပဲ IELTS တို့၊ Academic writing တို့ တန်းတက်လို့ရလားဆိုပြီး လာလာမေးကြတယ်။ တက်လို့တော့ရတယ်။ 5တန်းကနေ 10တန်းကို ခုန်သလိုတော့ ဖြစ်သွားမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ? ကိုယ်က အများကြီး ချဲ့ကားပြောနိုင်ပြီးသားဆိုမှ ထိထိရောက်ရောက် တိုတိုတုတ်တုတ် ပြောတတ်အောင်၊ ရေးတတ်အောင် Academic Writing classes တွေကို သင်သင့်တာပေါ့။ အကြောင်းအရာတခုကိုတောင် ကောင်းကောင်းလေးဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ English skills မရှိသေးဘူးဆိုရင် လိုရင်းတိုရှင်းပြောနည်းတွေ၊ စာကြောင်းတွေကစားနည်းတို့ဘာတို့ကို သင်ပေးလိုက်ရင် အလကားပဲဖြစ်သွားပါတယ်။
IELTS ဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး Intermediate Level English ကိုပြီးမှ IELTS အတွက် စပြင်ရင် ပိုထိရောက်မယ်။
အတွေးမမှားပါနဲ့။ ပညာကို တကယ်ရှာချင်ရင် အားစိုက်ထုတ်ပါ။ လုပ်သင့်တဲ့ အဆင့်တွေကို လုပ်ပါ။ အပြော၊ အရေး၊ အဖတ်တွေကို စနစ်တကျ ကျင့်ပေးပါ။ Intermediate လောက်ဆိုရင် Movies တွေကြည့်၊ စာတွေထပ်ဖတ်၊ self-studies တွေလုပ်သွားရင် English level က မတက်လာရင်တော့ ပြန်မကျသွားတော့ဘူး။
IELTSကို Basic/Beginner ကနေသင်လို့ရလား?
IELTS tactics တွေက3နာရီလောက် ဖတ်တာနဲ့ အကုန် သဘောပေါက်ပါတယ်။2လလောက်ကျင့်တာနဲ့ကို ရိုးအီသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် English စာကို အရင်ဆုံး သင်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုခေတ် English course books တွေ (အထူးသဖြင့် နာမည်ကြီး publisher တိုင်းက) CEFR လိုက်ပြီးတော့ course book ကို ထုတ်ရတာပါ။ အဲဒါကြောင့် General English သင်ရင်လည်း IELTS ကိုသင်တာနဲ့အတူတူပဲ။ CEFR ကိုသိရင် သဘောပေါက်သွားမှာပါ။
CEFR ဆိုတာက ဘာလဲဆိုတာ အတိုနည်းနဲ့ ရှင်းပြပါရစေ။
CEFR ဆိုတာက Common European Framework Reference လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာလို့ အဲဒါကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ အရင်ကဆိုရင် Russia, Germany, France, Spain, India, etc.စတဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးက နိုင်ငံတို့က သူတို့ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို့ English textbook တွေကို ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ Russia မှာ Basic မှာသင်တဲ့ Grammar Points တွေက Germany မှာ Advanced မှာမှသင်ရင် သင်ရလိမ့်မယ်။စသည်ဖြစ်ပေါ့ Grammar content တွေကမတူတော့ level တိုင်းတာတဲ့နေရာမှာလည်းမတူဆိုတော့ certificatesတွေ၊ diplomaတွေ accreditation (အသိအမှတ်ပြု) ပေးတဲ့နေရာမှာလာပြီး ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။
နောက်ဆုံး CEFR က linguistics တွေ၊ ဘာသာစကားသင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့အတူ level တိုင်း သင်ရမည့် ကျောရိုး grammar contents တွေ၊ sentence types တွေကို ဘယ်လို levelမှာသင်သင့်တယ်၊ ဘယ်လို levelကလူက ဘယ်လောက်ထိပြောတတ်ရမယ် စသည့် frameworks တွေကို ဆွဲထားပေးတာပါ။
CEFRကို 1960ကတည်းက စပြီး research လုပ်ခဲ့ပြီး၊ 2001လောက်မှာတော့ တကမ္ဘာလုံးက publishers (Cambridge, Oxford, Collin, BBC, National Geography, etc.) တွေအားလုံးက CEFRကိုပဲ ကျောရိုးခံပြီး Textbookတွေကို ထုတ်ပေးထားတော့ ဘယ်စာအုပ်သင်သင် ကိုယ့်level က သူများတိုင်းတာတဲ့ levelနဲ့ ညီပါတယ်။ English စာသင်ရိုးထုတ်တဲ့ Textbook တိုင်းမှာသုံးပြီးတိုင်းတာတဲ့ Exam Criteriaတွေကလည်း IELTS အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ အများကြီးသုံးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ English Level ကိုပဲ အရင်ကောင်းအောင်လုပ်ထားရင် IELTSကို တဆေသူရဲကြီးလို ကြောက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ပြီးတော့ Beginner, Elementary, စသည့် Enlgish Levelတွေက IELTS Band ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်နဲ့ ညီတယ်ဆိုတာကို တိုင်းတာလို့ရပြီးသားပါ။ ဉပမာ IELTS Band 6.5/7လောက်ရချင်ရင် Intermediate Levelလောက်ကို ကြေထားပြီး Test Preparation နည်းနည်းပြင်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
Four Skills General Englishကိုဘာလို့ ပိုသင်သင့်လဲ?
သင်သင့်တာက အဲဒီထဲမှာ English စာအပြင် တခြား cultureကလူတွေကို နားလည်နိုင်ဖို့၊ သိသင့်တဲ့ General knowledgeတွေရှိဖို့၊ ရှိသင့်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို မွေးထုတ်ပေးဖို့ Design တွေလုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့ သင်ယူတဲ့သူတွေက communication မှာကောင်းလာတဲ့အပြင်၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့နေရာ၊ လူများတွေနဲ့ topics အမျိုးမျိုးဆွေးနွေး ဖလှယ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း အများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်။
သင်ကြားမှုကိုနားလည်တတ်ကျွမ်းပြီးမှန်ကန်စွာသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဆိုရင် Englishစာသင်ယူရတာဟာ မခက်ပဲပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ တတ်တာလဲပိုမြန်ပြီး၊ သင်ယူမှုကိုလည်း ပိုမိုထိရောက်အောင်သူတို့ challengeလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျလဲသင်ပေးတော့ အပြောမှာ အသံနေအသံထား၊ အရေးမှာထိထိရောက်ရောက်၊ လူကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံချိန် သုံးသင့်တဲ့ formal english တွေလည်းတပါတည်းတတ်သွားပါတယ်။
သင်ကြားမှုကို တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာ/မဆိုတာကို ဘယ်လိုသိရလဲ?
English စာသင်ယူမယ်ဆိုရင် Cambridge ကအသိအမှတ်ပြုတဲ့ English စာသင်ကြားရေးလက်မှတ် (Teaching Certificate)တွေထဲမှာ Basic အကျဆုံးကတော့ TKT ဖြစ်ပြီး၊ အကောင်းဆုံးကတော့ CELTA ဖြစ်ပါတယ်။ CELTA ပြီးမှ တက်လို့ရတဲ့ DELTA ကတော့ teacher training လုပ်လို့ရတဲ့ အဆင့်ထိရှိပါတယ်။ တခြားဘွဲ့တွေ TEFL, TESOLလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်၊ ကောင်းကြပါတယ်။
Cambridgeကတော့ နှစ်ပေါင်း 40 လောက်ကို language teaching အတွက် research တွေဆက်လုပ်လာတဲ့အတွက် သိတဲ့အတိုင်း Language သင်ကြားရေးမှာ ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံးဆိုရင်မမှားပါဘူး။ IELTSကိုလည်း ပင်တိုင်ကိုင်တာက Cambridgeပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆရာ/မ မှန်တွေနဲ့4Skills English ကို ကျင့်သွားရင် သင်ကြားတဲ့ စနစ်ထဲမှာ IELTSဖြေရမှာလိုအပ်မည့် skills တွေကို ထည့်ပြီးသင်ပေးပြီးသားဆိုတော့ အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။
Textbookကြီးကိုပဲ ရှင်းပြီး passive learning နဲ့ ပဲသင်ယူရင်တော့ ထိရောက်မှုသိပ်မရှိပါဘူး။ English စာသင်ဖို training ယူထားတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေက ကျောင်းသူ/သားတိုင်းကို CEFR ရဲ့ Framework တွေနဲ့ နိုင်အောင်ကျင့်ပေးတဲ့ အပြင် topics အမျိုးမျိုးကို ပြောတတ်အောင် လိုတဲ့ knowledge, vocabs, grammar patterns, တွေကို သင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ IELTSအတွက် ပြင်ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စေတနာ၊သဘောထားပါ ကောင်းတဲ့ ဆရာ/မတွေဆိုရင် ကျောင်းသူ/သားတွေပိုရွေးသင့်တာပေါ့။ ဆရာ/မကောင်းတိုင်း ကျောင်းသား/သူတွေက သူတို့မှာရှိတဲ့ limited resourcesတွေ ဖြစ်တဲ့ အချိန်နဲ့ ငွေကိုပေးဆပ် ပညာသင်နေရတယ်ဆိုတာကို နားလည်ကြပါတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာ တစ်ခုပြောပြရဦးမယ်။ ကျောင်းလာအပ်တဲ့အချိန် တချို့ကျောင်းသူ/သားတွေက English Levelတွေ နိမ့်နေရင် စိတ်တိုသွားပြီး၊ ကျမက English စာ Diplomaလက်မှတ်ကို နာမည်ကြီးတဲ့ဟိုကျောင်းမှာ နှစ်နှစ်တောင် ထက်ထားတာတို့၊ ကျွန်တော်က IELTS ကို Basic ကနေ ၂ နှစ်ထိသင်ဖူးပြီးသားပါတို့နဲ့ ပြောပြီး ပြန်လှည့်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိဖူးပါတယ်။ သူတို့ အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ တနေနေရာရာမှာတော့ လွဲချော်သွားခဲ့တာတော့ သေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်း ဘယ်လောက်မာနတွေ တက်နေတက်နေ၊ ဘယ်လောက် certificates တွေကိုင်ကိုင် Test မှာရတဲ့ အမှတ်ကိုပဲ ကျောင်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာ သူများတွေကြည့်မယ်ဆိုတာကို သတိရသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Band Score ကို မရသေးရင် မာနကို ဘေးဖယ်၊ ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ပြန်ပြီး စာပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိမာနကြောင့် ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူးလေ။ အချိန်ကို ပြန်ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ ဘယ်ကျောင်းမှာ၊ ဘယ်ဆရာကို ကိုယ်က အချိန်ပေးမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းစဉ်းစားသင့်တယ်။
ဘာသာစကားသင်ရာမှာ “သိတာ”နဲ့ “သုံးတတ်တာ”တူလား?
မတူပါဘူး။ ဉပမာ piano/guitar လက်ကွက်တွေကို ၁နာရီလောက်နဲ့ အများကြီးမှတ်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသံလှလှ စည်းချက်ကျကျတီးတတ်နိုင်ဖို့၊ သီချင်းဆိုတဲ့အချိန် လက်ကွက်ကို ကြည့်စရာ စဉ်းစားစရာမလိုပဲတီးတတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လပေါင်းများစွာကျင့်ရတယ်။ လက်တွေသန်လာအောင်၊ muscle memory ဆိုတဲ့ လက်ကွက်တွေ အလိုအလျောက်ပြောင်းနိုင်ဖို့၊ သိနိုင်ဖို့ဆိုတာက လပေါင်းများစွာကျင့်ရပါတယ်။
မြန်မာမှာ သူငယ်တန်းကနေ ၁၀တန်းအထိ Englishစာသင်ပြီးတဲ့ ကလေးတွေက သုံးခွင့်မရှိတော့ guitar/piano လက်ကွက်တွေကို အလွတ်ကျက်နေသူတွေနဲ့ တူတယ်။ Exam ဖြေရင် ဒီလက်ကွက်နာမည်က ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖြေနိုင်တယ်။ အဲသလိုပဲ English စာ examမှာ Grammar တွေ၊ vocabularies တွေက ဘာလဲ/ဘယ်လိုသုံးလဲ မေးရင် ဖြေတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ပြောတဲ့နေရာ၊ ရေးတဲ့နေရာမှာ သိတဲ့ Grammar points တွေကထွက်မလာဘူး။ အဲဒါကြောင့် Grammarတွေ၊ vocabulariesတွေသိတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ fluency skills က မတက်လာဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ အများကြီး ကျင့်ရမယ်သုံးရမယ်။ မသုံးဘူးဆိုရင် textbook တစ်ခုလုံးကို အကုန်အလွတ်ကျက်ထားနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Text book ကစာတွေရှင်းတဲ့ video တွေ တစ်သန်းလောက်ကြည့်ပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ dictionary တစ်အုပ်လုံး အလွတ်ကျက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်… တကယ် မသုံးရဘဲ/ practice မလုပ်ရဘဲ fluencyက မတက်လာဘူး။
English ကို သင်တတ်တဲ့ ဆရာ/မတွေက textbook က topic လေးတွေကို လိုရင်လိုသလို အသုံးပြုပြီး အတန်းထဲမှာ တစ်ခါတည်း ကျင့်ပေးသွားပါတယ်။ Grammar pointကို ၅မိနစ်နဲ့ ရှင်းပေးပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာ activities အမျိုမျိုးနဲ့ ကျင့်ပေးသွားတယ်။ Grammarတွေ၊ စာလုံးတွေ တအားရှာစရာ/စဉ်းစားစရာမလုပ်ဘဲနဲ့ လျှောလျှောလျှူလျှူ သုံးတတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ နာရီပေါင်းများစွာကျင့်ရမယ်။ အလွတ်ဆိုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ topics အမျိုးမျိုးကို discussion လုပ်ခိုင်းပြီး သုံးခိုင်းတာပါ။ ဉပမာလေးနဲ့ ကြည့်ရအောင်–
-IELTS မှာ Speaking Part I မှာက Everyday topics/နေ့စဉ်တွေ့နေကျ ခေါင်းစဉ်တွေကို မေးပါတယ်။ What hobbies did you have asachild?လို့ မေးတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း စဉ်းစားပြီးပြောရတယ်။ ideaကို စဉ်းစားပြီး တွေ့တာနဲ့ စပြောရတယ်။ Grammarတွေ vocabularies တွေ စဉ်းစားဖို့ အချိန်မရဘူး၊ ideaတွေကို ထိထိရောက်ရောက်စီပြီးတော့ ပြောရတယ်။ ပြောလိုက်တဲ့ စာကျောင်းတွေမှား စကားလုံးလှတွေ၊ စာကျောင်းပုံစံ အလှတွေလည်း ထွက်လာရအုံးမယ်။ ဒီအဆင့်ထိရောက်ဖို့ဆိုရင် English ကို အများကြီး သုံးဖူးမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ထပ်ပြန်ပြောမယ်– “အများကြီးသုံးရပါမယ်”.
– Speaking Part IIမှာ အများအားဖြစ် မေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့ (အတိတ်က) experiences တွေဆိုတော့…General English တက်လာပြီး Pre-Intermediate/Intermediate Level ကကလေးတွေက သိပ်မပြင်ဆင်ဘဲနဲ့တောင် ပြောနိုင်တယ်။ Englishကို ပြောနိုင်တဲ့သူ ဘယ်သူမဆိုအတွက်လည်း လွယ်တယ်။
-Speaking Part III ဆိုရင် General knowledge နည်းနည်းရှိမှ ပြောတတ်မယ်။ ဉပမာ- What’s your favorite law? What are the qualities thatagood leader should have? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေက General English သင်လာရင်း topics အများကြီးကို တွေ့ဖူးပြီးသားကလေးတွေက ပြောစရာတစ်ခုခုတော့ အနည်းဆုံးရှိတယ်။ စာသင်နေရင်း စာအုပ်တွေ articlesအမျိုးမျိုးဖတ်လာတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်း ပြောစရာပိုများတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် Intermediate ကို level ကြေတယ်ဆိုရင် speaking ကို IELTS Band6အေးဆေးရတယ်။
Band 7နဲ့ အထက်ရချင်ရင် issues အမျိုမျိုးကို (environment, social, political, archeological, etc.)ကို ပိုနက်နက်နဲနဲ ဖတ်ရမယ်၊ ဆွေးနွေးရမယ်။ Vocabularies, Sentence variations, အမျိုးမျိုးကိုလည်း ပိုဂရုတစိုက်ကြည့်ရမယ်။ ဒါတွေကို preparationလုပ်ချိန်မှာ တစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရတယ်။
အရေးပိုင်းကလည်း အတူတူပါပဲ။ Englishစာကောင်းရင် ရေးနည်းတွေကို အချိန်တိုအတွင်း ကြည့်လိုက်ရင် သဘောပေါက်တယ်။
IELTSကို Beginner ကနေသင်ပေးတဲ့ coursebookတွေတော့ရှိပါတယ်။ သင်ပေးတဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ IELTSကို ၂နှစ်သင်လာတာပါ ဆိုတဲ့သူတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ “ဝ” မရှိဘဲ “ဝိ” ရေးချင်လို့တော့မရပါဘူး။ English စာကို ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပါ။ ကျောင်းသားတွေအတွက် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလို့ ဒီအကြောင်းလေးကို အမုန်းခံပြီးပြောရတာပါ။ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ငြင်းချင်သူတွေရှိရင် သက်သေထောက်ပြီး ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။
IELTS တို့ TOEFL တို့ဖြေဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် English စာကို ကောင်းအောင် အရင်လုပ်ပါ။
မှန်ကန်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတန်း၊ သင်ကြားမှု နဲ့ သင်ယူမှုကို ရွေးပါ။
English စာအပြင် အရေးကြီးတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေရပါမည်။ စာဖတ်တဲ့အကျင့်ကို ၁၀တန်းအောင်တဲ့အချိန်ကစပြီး လုပ်ပါ။ Graded Readersတွေကစဖတ်ပြီး၊ လွယ်တဲ့ သတင်းစာတွေကစပြီး၊ ပိုခက်ခဲတဲ့ articles တွေကို ဖတ်ပါ။
(National Geographic, Newscientist, BBC science, Reader’s Digest စတဲ့ Magazine တွေကို website တွေမှာ free ဖတ်လို့ရတယ်။)
English စာသင်တယ်ဆိုတာ textbookကို သင်ယူ‌နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမြဲသတိရပါ။ များများသုံးရမည့်နေရာတွေ အတန်းတွေကို ရှာပါ။
English Language Diploma/certificates တွေ အခုပေါင်း တစ်သန်းလောက်ကိုင်ထားရင်လည်း သူများတွေက ပြောတတ်လား၊ ရေးတတ်လား၊ ဖတ်တတ်လား ဆိုတာကိုပဲ အမြဲကြည့်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ တတ်အောင်သင်ပါ။
IELTS Exam Preparation ကို ဘယ်အချိန်တက်သင့်လဲ။
ဖြေဖို့သေချာပြီဟေ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Intensive preparation ကို သွားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က intensive ရွေးတော့မယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ ၂နာရီကနေ ၄ နာရီလောက် ကျင့်ဖို့ အချိန်ပေးနိုင်မှ ဒီအတန်းတွေက ကိုယ့်အတွက် ပေးရတဲ့ သင်တန်းကြေးနဲ့ တန်ပါတယ်။ SLD မှာသင်ပေးတဲ့ ပုံစံဆိုရင်တော့ ရေးနည်း၊ ဖတ်နည်း၊ ပြောနည်း၊ နားထောင်နည်းတွေက တစ်ပတ် (သို့) 10ရက်လောက်နဲ့ အကုန်သင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ Practice, practice, practice, withalot of reviews and feedbacks ပါ။
SLDမှာ IELTS Exam Preparation က ၂လကနေ ၃လအထိလုပ်ပေးပါတယ်။ တက်တဲ့သူတိုင်းက ၂လအတွင်းသင်တဲ့ စာအုပ်က အထူကြီးတွေ ၁၀အုပ်အနည်းဆုံးပြီးပါတယ်။ စာအုပ်သယ်ရတာ သက်သာအောင် websiteထဲမှာ ၁၀အုပ်စာလောက် ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Exam preparation အတွက် စာကြည့်ဖို့ အချိန်မရှိဘူး၊ အိမ်စာတွေနိုင်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ပတ် ၂ ရက်လောက်တော့ တက်သင့် ကျင့်သင့်ပါတယ်။ စာမေးပွဲ မဖြေခင်တစ်လလောက်ကိုတော့ တစ်နေ့ ၃နာရီခွဲ မှ ၆နာရီခွဲထိလောက် အချိန်ပေး ပြန်ကျင့်သင့်ပါတယ်။ Exam preparation ဆိုတာ exam strategies တွေအပြင်၊ stamina, time management တွေကျင့်ရတာပါ။
* stamina -ဆိုတာ ၃နာရီလုံးလုံးကို ဦးနှောက် တအားမပင်ပမ်းဘဲ ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်သေးတာကို ခေါ်တယ်။ တနေ့ ၃နာရီလောက် စာလုပ်မယ်ဆိုရင် ၂လလောက်ဆိုတာနဲ့ stamina ရှိပါပြီ။